မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ ဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ - SANTHITSA
မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ ဘယ်လို ဖယ်ထုတ်မလဲ
မိန်းမသားများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီပိုများကို လက်သင့် မခံချင်ကြတာ
အမှန်ပင် မဟုတ်ပါလား။ အဆီပိုတွေ အရမ်းများနေတဲ့ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကျစ်လစ်ပြီး အဆီပိုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ငေး အားကြနေရပြီဆိုရင် သင် အားထုတ်မှူ ရှိရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတိပေးလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့အဆီပိုတွေများနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီတွေကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ မောင်းထုတ်မလဲ။
ခေါင်းစားမနေပါနဲ့ အခုဖော်ပြမဲ့ နည်းလေးကတော့ သင့်အတွက် အသုံးဝင်နိုက်တာမို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
သဘာဝက ပေးထားတဲ့ သစ်သီးသစ်နှံတွေဟာ လူသားများအတွက် အမြဲလိုလို အကျိုးပြုနေတတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ သင်မမေ့ပါနဲ့။
သင် လက်တစ်ကမ်းမှာပဲ ရှာဖွေရမှာမို့ သင့်အတွက် မခက်ခဲပါဘူး။ ရွေးချယ်ရန် ပစ္စည်းများ…..
ချင်း (ဂျင်း) တက် အနည်းငယ်၊ သခွားသီး အနေတော် တစ်လုံး၊ သံပုရာသီး အနေတော်တစ်လုံး၊ ပူစီနံရွက်အနည်းငယ်…..
ဒီပစ္စည်းတွေ ရပြီဆိုရင် ပထမဆုံး ချင်းတက်ကို ရေသန့်စင်အောင် ဆေးပြီး ကြိတ်ချေကာ အရည်ကို လက်ဘက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ ညှစ်ယူထားပါ။ သခွားသီး အနေတော်တစ်လုံးကို ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ… အခွံ ခွာပစ်ရန်မလို… သံပုရာသီးကိုလည်း ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ… သံပုရာရည်များ ဆုံးရှူံး မသွားဖို့တော့ သတိပြုပါ။
ပူစီနံအရွက် ကောင်းကောင်းပို အရွက်ချည့် ၁၂ ရွက်ခန့် ချွေထားပါ။ ရေသန့်စင်စွာ ဆေးထားဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်….. ကဲ ပစ္ဏည်းတေ့ စုံညီပြီဆိုရင် ရေသန့် တစ်လီတာထဲမှာ အားလုံးကို ရောပြီး ထည့်လိုက်ပါ… ပြီးရင် အဖုံးကို လုံအောင် ဖုံးပြီး ၅နာရီ ကြာအောင် ထားပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားရင် ပိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ တစ်ည သိပ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ သောက်သုံးပုံ နည်းစနစ်….
၅ နာရီကြာ သို့မဟုတ် တစ်ညအိပ်ကြာ ထားပြီးသော သီးနှံစုံအရည်ကို မနက်မှ စတင်၍ ညနေအထိ တစ်နေ့တာပတ်လုံး ကုန်စင်အောင် သောက်ပေးပါ။ အဖတ်များအား စားသုံးရန် မလိုပါ။ ဒီသီးနှံရည်ကို ၄ ရက်ဆက်တိုက် သောက်ပေးခြင်း အားဖြင့် သင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အဆီပိုများ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အံသြစရာ ကောင်းလောက်အောင် သည်အရည်ဟာ သင့် ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေကို ကျစေရုံမက အသားအရေ လှပမှူကိုလည်း ပံပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်များကိုလည်း ပြေပျောက်စေမှာဖြစ်ပြီး ဝမ်းတွင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာအချို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်တာကို တွေ့မြင်ရမှာ
ဆားပွင့်လေး အနည်းငယ် ထည့်သောက်ဖို့ကို မမေ့နဲ့နော်…..
မလိုအပျတဲ့ အဆီပိုတှေ ဘယျလို ဖယျထုတျမလဲ
မိနျးမသားမြားအနနေဲ့ မိမိတို့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာ မလိုလားအပျတဲ့ အဆီပိုမြားကို လကျသငျ့ မခံခငျြကွတာ
အမှနျပငျ မဟုတျပါလား။ အဆီပိုတှေ အရမျးမြားနတေဲ့ မိမိရဲ့ ခန်ဓာကိုယျဟာ ကဈြလဈပွီး အဆီပိုမရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကွညျ့ငေး အားကွနရေပွီဆိုရငျ သငျ အားထုတျမှူ ရှိရမယျလို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတိပေးလိုကျပါ။
သငျ့ရဲ့အဆီပိုတှမြေားနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျက မလိုလားအပျတဲ့ အဆီတှကေို ဘယျပုံဘယျနညျးနဲ့ မောငျးထုတျမလဲ။
ခေါငျးစားမနပေါနဲ့ အခုဖျောပွမဲ့ နညျးလေးကတော့ သငျ့အတှကျ အသုံးဝငျနိုကျတာမို့ ဖတျကွညျ့လိုကျပါ။
သဘာဝက ပေးထားတဲ့ သဈသီးသဈနှံတှဟော လူသားမြားအတှကျ အမွဲလိုလို အကြိုးပွုနတေတျတယျ ဆိုတာကိုတော့ သငျမမပေ့ါနဲ့။
သငျ လကျတဈကမျးမှာပဲ ရှာဖှရေမှာမို့ သငျ့အတှကျ မခကျခဲပါဘူး။ ရှေးခယျြရနျ ပစ်စညျးမြား…..
ခငျြး (ဂငျြး) တကျ အနညျးငယျ၊ သခှားသီး အနတေျော တဈလုံး၊ သံပုရာသီး အနတေျောတဈလုံး၊ ပူစီနံရှကျအနညျးငယျ…..
ဒီပစ်စညျးတှေ ရပွီဆိုရငျ ပထမဆုံး ခငျြးတကျကို ရသေနျ့စငျအောငျ ဆေးပွီး ကွိတျခကြော အရညျကို လကျဘကျစားဇှနျး တဈဇှနျးစာ ညှဈယူထားပါ။ သခှားသီး အနတေျောတဈလုံးကို ခပျပါးပါး လှီးထားပါ… အခှံ ခှာပဈရနျမလို… သံပုရာသီးကိုလညျး ခပျပါးပါး လှီးထားပါ… သံပုရာရညျမြား ဆုံးရှူံး မသှားဖို့တော့ သတိပွုပါ။
ပူစီနံအရှကျ ကောငျးကောငျးပို အရှကျခညျြ့ ၁၂ ရှကျခနျ့ ခြှထေားပါ။ ရသေနျ့စငျစှာ ဆေးထားဖို့လညျး မမနေဲ့နျော….. ကဲ ပစ်ဏညျးတေ့ စုံညီပွီဆိုရငျ ရသေနျ့ တဈလီတာထဲမှာ အားလုံးကို ရောပွီး ထညျ့လိုကျပါ… ပွီးရငျ အဖုံးကို လုံအောငျ ဖုံးပွီး ၅နာရီ ကွာအောငျ ထားပါ။
ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ထားရငျ ပိုကောငျးမှနျပါတယျ။ တဈည သိပျထားရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ သောကျသုံးပုံ နညျးစနဈ….
၅ နာရီကွာ သို့မဟုတျ တဈညအိပျကွာ ထားပွီးသော သီးနှံစုံအရညျကို မနကျမှ စတငျ၍ ညနအေထိ တဈနတေ့ာပတျလုံး ကုနျစငျအောငျ သောကျပေးပါ။ အဖတျမြားအား စားသုံးရနျ မလိုပါ။ ဒီသီးနှံရညျကို ၄ ရကျဆကျတိုကျ သောကျပေးခွငျး အားဖွငျ့ သငျ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှ အဆီပိုမြား သိသိသာသာ ကဆြငျးလာသညျကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
အံသွစရာ ကောငျးလောကျအောငျ သညျအရညျဟာ သငျ့ ခန်ဓာကိုယျက အဆီတှကေို ကစြရေုံမက အသားအရေ လှပမှူကိုလညျး ပံပိုးပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အဆိပျအတောကျမြားကိုလညျး ပွပြေောကျစမှောဖွဈပွီး ဝမျးတှငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာအခြို့ကိုလညျး ပြောကျကငျးစနေိုငျတာကို တှမွေ့ငျရမှာ
ဆားပှငျ့လေး အနညျးငယျ ထညျ့သောကျဖို့ကို မမနေဲ့နျော…..